Antenimieram-pirenena Ahoana marina ny fomba fiasany ?
Bemasoandro Itaosy Tsy eken’ireo mponina ny fananganana pylone ao an-tanànany
Rehefa efa somary nangingina ny resaka fananganana pylone hataona orinasa tsy miankina iray anaty tanàna tato ho ato dia niverina indray. Anisan’ny miaina izany ireo mponina ao amin’ny fokontany Bemasoandro, kaominina Bemasoandro, Distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Seranan-tsambon’i Toamasina Efa mahazaka kaontenera miisa 250 000
Ny zoma hariva teo tao amin’ny foyer social Canada no nanao ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao ny mpiasan’ny seranan-tsambon’i Toamasina sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ary ireo nasana manokana, izay notarihan’ny tale jeneralin’ny Spat Atoa
Fampiatoana ny fanondranana omby Hisy fiantraikany amin’ny lanja ara-bolan’i Madagasikara
Mbola mitana ny sain’ny maro hatrany ny didim-panjakana mandrara ny fanondranana omby.
Ofisy Malagasin` Akoranafo Tratra ny vidin-tsolika tena izy
Miankina amin`ny vidin`ny barila any ivelany sy ny sandan`ny vola dolara ny vidin-tsolika eto Madagasikara.
Varotra Elektronika Efa miroso tsikelikely i Madagasikara
Manana tombony i Madagasikara satria mpikambana ao amin’ny Fikambanana Maneran-tany momba ny Varotra (OMC).
Betsaka ireo trangan-javatra niainana teo amin’ny Lapan’i Tsimbazaza,
indrindra ny fandinihana sy fandaniana ireo volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana tato anatin’ny iray volana sy tapany. Mitohy hatrany ny asa ao amin’ny Antenimieram-pirenena amin’izao fotoam-pivoriany izao. Ny asany no hezahina ampahafantarina eto.
Ny Antenimieram-pirenena dia voafaritry ny lalàmpanorenana. Tsara foana no miainga amin`ny fampitahana amin`izany rehefa resaka andrimpanjakana toy itony. Mizara telo lehibe ny asan’ny Antenimieram-pirenena ary tsy maintsy voafaritra amin`izay lalam-panorenana izay foana. Voalohany, ny fandaniana ny lalàna, manara- maso ny asan`ny mpanatanteraka na governemanta ary ny manombatombana ny asa nataon`ny fanjakana ao anatin`ny famoahana ny olana mianjady eto amin`ny firenena. Tokony hifantoka amin`ireo zavatra telo ireo ny hery rehetra rehetra entina manatanteraka ny asa.
Fandaniana lalàna sy ny dingana arahina
Misy ny dingana tsy maintsy arahina dia ny fametrahana volavolana rijan-teny na “depot de projet de texte”. Ho an`ny mpahay lalàna, indrindra izay mikirakira ny “direction de la legislation” dia ny “depot” izany dia miantomboka amin`ny fandinihana ilay “projet de texte”. Rehefa vita izay dia miditra ao anatin`ny fivoariana iray atao hoe “conference des presidents” izay mandray an`ilay “projet de texte” ary ao anatin`izany no volavolaina ny andro sy ny fotoana handinihana azy na “ordre du jour”. Rehefa vita izay dia entina eo anivon`ny fivoriambe hotapahina. Raha tapaky ny rehetra ny fandaharam-potoana dia mandeha ny asam-baomiera sy ny fivoriambe itambarana. Indraindray rehefa tonga amina raharaha heverina fa manahirana dia azo tsinjaraina ihany koa ny fandraisam-pitenenana. Rehefa vita daholo ny fandaniana rehetra mandritra ny « conference des présidents » dia tsy maintsy miditra amin`izay amin`ilay atao hoe asam-baomiera na « travaux de commission » .
Ny asam-baomiera dia tsy azo idiran`ny olona hafa raha tsy izay olona ilaina. Ahitana ny mpikambana rehetra ao amin`ny birao maharitra sy ireo filoham-baomiera satria miisa 31 ny vaomiera na “commission”. Eo ihany koa ny filohan`ny vondrona parlemantera, ny solontenan`ny governemanta, ny mpikambana ato amin`ny Antenimieram-pirenena toy ny depiote na koa ny sekretera jeneralin`ny antenimieram-pirenena ary ny mpikambana ao anatin`ireo vaomiera ireo. Eo ihany koa ny vaomiera hafa ka afaka manatrika ihany koa raha solombavambahoaka fa tsy manapa-kevitra raha misy fanitsiana tokony hatao. Mahakasika an`ireo volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana dia vaomiera 2 no nandinika azy dia ny vaomieran`ny lalàna, ny vaomieran`ny atitany sy ny manampahefana. Ny mpikambana ao anatin`ny governemanta koa dia tsy maintsy manatrika ny asam-baomiera noho ity farany nanolotra an`ilay voloavola. Ny asam-baomiera dia tsy maintsy hatrehin`ireo teknisianina eo anivon`ny Antenimieram-pirenena izay mandray an-tsoratra sy manampy ny filoham-baomiera. Marihina fa ny vaomiera dia masi-mandidy amin`izay manatrika fivoriam-baomiera. Vita ny asam-baomiera dia izay tapaka tao no entina ao anatin`ny fivoriambe itambarana ka ity farany no tompon`ny teny farany. Raha fehezina, ny fandaniana lalàna dia asam-baomiera ary avy eo dia hitambarana”. Mahakasika izany indrindra, ny “Commission plénière” dia tsy tokony hatrehin`ny olona fa ny depiote ihany. Ny “Assemblee pleniaire” kosadia azon`ny rehetra hotronina.
Na ny governemanta na ny depiote na koa ireo senatora, mitovy foana ny dingana arahina rehefa mametraka “projet de texte”. Ity farany dia tsy maintsy mandalo dingana roa hahafahana manohy azy. Voalohany, tsy maintsy mandalo eo anivon`ny governemanta hanaovana « contrôle de recevabilite resolu », izany hoe jerena raha tontolon`ny lalàna na tontolon`ny fitsipika. Raha ity farany ity mantsy dia an`ny “executive” na mpanatanteraka fa ny lalàna indray no an`ny depiote sy ny senatora. Ny governemanta no mandefa taratasy milaza fa ity zavatra ity dia andraikiny na tsia. Afaka mampihatra ny fandinihana ilay “texte” izay. Faharoa dia tsy maintsy jerena raha misy “impact budgetaire” ka miankina amin`ny vaomieran`ny vola sy ny tetibola. Izany no atao hoe “Recevabilité finançière”. Ny “Projet de loi” na volavolan-dalàna kosa tsy tratran`izany satria ny asan`ny fahefana mpanatanteraka (governemanta) dia mifanaraka foana amin`ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ataony ary tsy mivaona mihitsy. Matetika misy depiote sorena satria misy ireo “projet de texte” natolony no tsy nodinihana nefa ny an`ny governemanta dia mandeha foana.
Lapa ho an`ny rehetra
Ny antenimieram-pirenena sy ny antenimierandoholona dia misokatra ho an`ny rehetra raha toa ka haka vaovao izay ilainy ny olom-pirenena. Raisina amin’ny lafiny roa anefa ilay vaovao. Ny voalohany dia ny solombavambahoaka izay samy manana ny fijery sy ny firehana politikany. Ny faharoa dia ireo teknisianina izay tsy momba ny atsy na ny aroa. Araka izany, mitodika eny amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena ny mason’ny vahoaka malagasy. Mitaky asa mivaingana ny mpiray tanindrazana avy amin`ny solombavambahoaka izay nametrahan’ny olom-pirenena tsirairay ny fitokisany tamin’ny alalan’ny fifidianana mba hisolovava azy ary hitady vahaolana amin’ny fampandrosoana ny disitrika niaviany avy ary hitondrana vahaolana mahomby ho an’ny tombontsoa ambonin’ny vahoaka malagasy raha mandalo fotoan-tsarotra ny firenena na voakitikitika ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena.